काठमाण्डौंको कोटेश्वरमा आज घटेको अनौठो घट्ना.. प्रहरीलाई समेत बनायो हैरानी ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौंको कोटेश्वरमा आज घटेको अनौठो घट्ना.. प्रहरीलाई समेत बनायो हैरानी !
काठमाण्डौंको कोटेश्वरमा आज घटेको अनौठो घट्ना.. प्रहरीलाई समेत बनायो हैरानी !
काठमाडौं । सरकारले चैत ११ चैतदेखि जारी गरेको लकडाउनलाई विहिवार देखि काठमाडौंमा केही खुकुलो बनाएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाएपनि नीजि सवारी साधन चलाउन पाउने र पैदल एक्लै हिड्नेलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गर्यो । असार १ देखि सरकारी कार्यालय २ सिफ्टमा खुल्ने र ब्यवसायीहरुले पनि पसल सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
अधिकांश मोटरसाइकलमा श्रीमान श्रीमती चढेको देखेपछि ट्राफिकले त्यसरी २ जना चढ्न नपाइने भन्दै रोक्यो । कसैले विरामीलाई पछाडी राखेर पनि अस्पताल लैजादै गरेको देखेपछि ट्राफिकलाई धर्म शंकट परेको छ ।
यस्तैमा काठमाडौंको कोटेश्वमा स्कुटरमा दुई जनालाई देखेपटि ट्राफिकले रोक्यो । युवा युवती श्रीमान श्रीमती थिए । प्रहरीले रोकेपछि केहीबेर चर्काचर्की पनि भयो । उनीहरु एउटै अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी थिए । प्रहरीले रोकेपछि आफुहरुको बाध्यता रहेको भन्दै उनीहरु प्रहरीसंग विवादमा उत्रिए । प्रहरीले पनि सरकारको निर्णय सुनाउँदै आफ्नो पनि बाध्यता भएको बताए । केहीबेरको विवाद पछि प्रहरीले उनीहरुलाई छोडिदियो ।
त्यस्तै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोटरसाइकलमा जोर विजोर प्रणाली लागु नरहेको स्पष्ट बनाएको छ। महाशाखाका प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन सुरु भएको जानकारी दिए।
‘मोटरसाइकलमा जोर विजोर प्रणाली लागु गरिएको छैन। तर एक जनाभन्दा बढी चढेका मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिइएको छ’, एसपी श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार अहिलेसम्म ३ सय ४४ मोटरसाइकल र एक सय ४९ चारपाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । जोर-विजोर प्रणालीका आधारमा चार पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए।
सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै निजी सवारी साधनका लागि लागु गरिएको जोर विजोर मोटरसाइकलका हकमा लागु नहुने निर्णय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार जानकारी गराएका थिए।
सार्वजनिक यातायातमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको जानकारी दिँदै उनले मोटरसाइकलबाहेकका निजी सवारी साधनमा भने जोर बिजोर लागु हुने र लामो दूरी चल्न नपाउने बताएका थिए।
बिष्णु खत्री र शान्ति श्रीको स्वरमा कन्चनको मृ,त्यु पछि बनेको गीतले रु,वायो लाखौ दर्शकलाई